6 ZAMAKRELE: ILETA YOLAWULO
Ukuba ufuna ukwazi yonke into 6 zeekrele, intsingiselo kunye nokutolika okunokunikwa kuyo ngokudibanisa ezahlukeneyo, emva koko ndiyakumema ukuba usijoyine kule nqaku inomdla. Uya kumangaliswa!
1 6 zeekrele
3.1 I-6 yeekrele kumgangatho waseSpain
3.2 I-6 yamakrele Tarot Marseille
4 I-6 yeekrele zokudityaniswa
El I-6 yeekrele tarot Yeqela le-arcana encinci. Le leta inomdla isibonisa utshintsho ekufuneka silwenzile kubomi bethu, sishenxa kwiimeko, izinto, kwanabantu abangasiniki nantoni na elungileyo.
I-6 yeenkemba zisixelela ukuba kufuneka senze izigqibo kunye nezenzo zokuphucula ubomi bethu, sizinike ixesha lokucingisisa kunye nokucacisa izimvo, sibeke amathandabuzo ecaleni kwaye siqale indlela eyahlukileyo.
Le arcana incinci inxulunyaniswa nento yomoya, enye yezinto ezine ezidale yonke into esijikelezileyo (indalo, indalo kunye nobukho bethu). Umoya ufuzisela ubomi, utshintsho, ukukhawuleza, imfuno, inxulumene nokungabonakaliyo (ukucinga kunye nolwazi), azibonwa, kodwa siyazi ukuba zikhona kwaye siyazisebenzisa.
Kwi-archetype yoqobo, sinokuthi siqwalasele kweli khadi, umfazi ohamba ngenqanawa nonyana wakhe kulwandle olunesaqhwithi ukuya kwelinye icala, kwelinye icala uzolile kwaye ulapho, apho lo mfazi esiya khona, esiya kwilizwe ukude kunokubonakala ngasemva.
Kwisikhephe kukho amakrele amathandathu athe nkqo, khumbula ukuba iPalo de Espadas ifanekisela ubukrelekrele, ngenxa yoku, sinokuzicacisa ezi nkemba njengesizathu sokuba eli bhinqa lisetyenzisile ukwenza le ndlela.
Umfazi ubonakalisa ukuba uthathile ingqalelo, kodwa uthathe isigqibo sokubaleka kumanzi axokozelayo (iingxaki, ungquzulwano, iimeko ezingathandekiyo), kwaye ngoku uya kwindawo ethe cwaka, kunye nonyana wakhe (ubeka usapho lwakhe kuqala kwaye abathathe indawo ekhuselekileyo).
El I-6 yeekrele tarot, usikhokelela kwinto ekufuneka siyenzile, sithathe isigqibo, nokuba kuya kuba buhlungu kwaye somelele, kungcono ukukwenza ngoku, kwaye uphelise yonke into engasifanelanga.
Kubalulekile ukuba sithathele ingqalelo ukuguqula ubomi bethu, sikubone konke oku njengethuba lokujongana noloyiko lwethu, inkxalabo kunye neengxaki, sizibeke ecaleni, kwaye siye kude kakhulu.
Le leta inamandla ekwimo yayo elungileyo ibonisa ukuhamba, ukuhamba, amashishini amatsha, ukuzilolonga, ukukhathalela impilo, ukuphumla (ukuthintela uxinzelelo kunye noxinzelelo lwesiqhelo).
Ukuba kubonakala kuguquliwe, kunokwenzeka ukuba kukho uqhawulo-mtshato, intshukumo, utshintsho lomsebenzi okanye iprojekthi. Kuya kufuneka uye kude namathandabuzo, unxunguphalo kunye noloyiko lokuba ezi ntlobo zotshintsho zinokubangela.
Ukuba unqwenela, ungaqhubeka nokufunda malunga nayo I-Ace yeekomityi nayo yonke into ekuxelela yona, ngena apha.
I-6 yeekrele kumgangatho waseSpain
Ukutolikwa esikunikwa ngumgangatho waseSpain kububulumko kunye nokubonakalisa, kuba kubonisa amaxesha otshintsho, amaxesha apho singonzakala ziimeko esingafuni ukuba nazo, kodwa eziyinxalenye yobomi.
Kuya kufuneka siziqwalasele ezi ndlela zokuziphatha, zombini iqabane lethu, njengabahlobo, iindawo zokusebenzela. Kubalulekile ukuba ukucamngca kusivumele ukuba sifumane iindlela zokuphuma, ukunqanda ukuwela kumaxesha oxinzelelo, iimvakalelo zokudana kunye nomsindo. Kufuneka sikhumbule ukuba iinguqu ziyimfuneko kwaye ziyinxalenye ebalulekileyo yendlela yethu kweli hlabathi, kwaye ukuba enkosi kubo singafunda kwaye siphucule.
Ukuba ibonakala ithe tye, ke I-6 yeekrele kumgangatho waseSpain, isibonisa ukuba iimeko zongquzulwano, inkohliso, ukungcatshwa nezinye ziya kuza. Kufuneka sizithathele ingqalelo ezi zinto, kwaye senze ngaphambi kokuba zisichaphazele ngokuthe ngqo, ngayiphi indlela?, Sisuka koku.
Kuxhomekeke kwindibaniselwano ebonwayo ngexesha lokubaleka, kunokwenzeka ukuba xa uqala ukuqaphela ezi ngxaki kuthando lwakho okanye kubomi bobuhlobo, ke kufanelekile ukuba uthethe nomntu omthandayo kwaye uhambe nabo, okanye uthathe isigqibo sokufudukela kwindawo Uyathanda.
Emsebenzini, kulungile ukuqaphela iiprojekthi ezintsha, ukulawula imingcipheko enokuthi iqhutywe xa ingasebenzi njengoko sifuna.
Ukuba ikhadi libonakala liguquliwe, sinokujamelana neemeko ezingalindelekanga, kodwa hayi ezimbi. Singafumana ukuphucuka kwimpilo ukuba sibonisa ingxaki, sinokuziva sitsalelekile kumntu omtsha, kwaye emalini, kunokwenzeka ukuba inkcitho ebingacetywanga ivele.
I-6 yamakrele Tarot Marseille
El I-6 yamakrele Tarot Marseille, inxulunyaniswa nesiqhelo, nokuba kusekhaya okanye emsebenzini, ezichaphazela ngqo impilo. Ke kuyakufuneka ufumane indlela yokutshintsha oku kwangoko.
Ukuba ileta ivela ngendlela eyiyo, oko kuthetha ukuba uyakuthatha uhambo okanye utyelelo olwalungekho kwizicwangciso zakho, kwaye uya kudibana nomntu okanye kuya kubakho into eza kudala ukungqubana, ke kuya kufuneka uthathe isigqibo esinzima kuwe okwethutyana, uzama ukutshintsha imeko enikezelweyo kuwe.
Ukuba ikhadi libonakala likwimo eguqulweyo edityaniswe ne-arcana eyakhayo, uyakufumana iindaba ezimnandi ebomini bakho, kwaye ukuba libonakala liguqulwe kunye ne-arcana engalunganga, uya kuwela kwimeko yokuthandabuza noxinzelelo, apho kufuneka ulumke kakhulu, kwaye uzame ukubaleka kuyo, ujonge kubo.
I-6 yeekrele zokudityaniswa
Kuxhomekeke kwindawo yekhadi ngexesha lomqolo, kunye nobukho bayo nezinye iarcana (ezilungileyo okanye ezimbi), emva koko I-6 yeekrele zokudityaniswa Inokukuchaphazela ngeendlela ezahlukeneyo:
I-6 yee-Spades kunye ne-Ace yeeNgqekembe: ibonisa ukuba uzisebenzise kakuhle ezinye iiprojekthi okanye amathuba kwaye wakwazi ukuwagqiba ngempumelelo.
6 yeenkemba kunye I-Ace yeekomityi: Unokufumana uthando nomntu obungalindelanga ebomini bakho.
6 yeenkemba kunye Inca yesipeyidi: inxulunyaniswa nohambo okanye intshukumo engxamisekileyo: (nokuba yeyomsebenzi okanye yempilo).
I-6 ye-Spades kunye ne-Ace yeWands: Bonakalisa iingxaki nabahlobo okanye abamelwane, zama ukulamla.
Zininzi ezinye indibaniselwano phakathi kwe-6 yeenkemba kunye enkulu arcana okanye ngaphantsi, nganye iya kuba nokutolika okwahlukileyo, kodwa ihlala isekwe kutshintsho, imeko engalindelekanga, inguqu.